“Ary Hanao Sary Mandrapahafatiko” Fanontaniana Valo Ho An’ilay Mpanaingo An-tsary Lorraine Rodriguez · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Oktobra 2013 4:02 GMT
Vakio amin'ny teny English, عربي, فارسی, Français, Português, 日本語, Español
Nahita an'i Lorraine Rodriguez aho fotoana maro izay, rehefa namaky ilay bokin-tononkalo “El origen de los párpados” (2008) nosoratan'i Mara Pastor [es]. Taona maro izay no lasa, mbola reko indray ny anarany, amin'ny maha-mpampihaingo an-tsary ny fonom-boky tokan'i Juan Pablo “Day After Day”. Ary rehefa nahita ny bilaoginy aho, avy eo ny tranonkalany, naha lasa eritreritra ahy izy. Ny boky voaravaka sary mitantara ny fiainany nosoratany “My Name is Lorraine” / Lorraine no anarako, sy ilay “about / Mombamomba” ao amin'ny tranonkalany, no fototr'ireo fanontaniana amin'ity fanadihadiana ity, natao tamin'ny alalan'ny mailaka, toy ny fanaovantsika ireo zavatra maro amin'izao fotoana izao.
Avy any “Porto Rico” i Lorraine Rodriguez, 30 taona, ary mipetraka ao “Barcelone”, any Espaina. Kanefa izy no tsara toerana indrindra mba hanome topimaso kely amin'ny fiainany.
Global Voices (GV): Mamelà ahy aminà fanontaniana efa mahazatra, kanefa tsy maintsy manontany aho: Oviana sy naninona ianao no nanomboka nanao sary?
Lorraine Rodríguez (LR): Tantara mitovy foana no tantaraiko na oviana na oviana ny olona manontany ahy ny momba izany. Fony aho fito na valo taona, rehefa tany amin'ny tranon'ny nenitoa sy dadatoanay, nahita ilay rakikiran'ny Guns N’ Roses “Appetite for Destruction” tao anatin'ny entan'ny anadahiko aho. Tena nahatalonjona ahy ilay fonony (lakroa teo ambonin'ny loko mainty ilay izy, ary ny sarin'ireo olona tsirairay tao anatin'ny tarika, kanefa ny sarin'izy ireo/karandoha dia napetraka teny amin'ny tendro tsirairain'ilay lakroa). Nila nanao ny ahy manokana aho. Rehefa nody tany an-trano aho, napetako teo amin'ny varavaran'ny efitrano fandriako ilay izy. Nisomaritaka ny ray aman-dreniko. Iny no fotoana voalohany niainana ny fananana traikefa tamin'ny “fanaovan-tsary”. Tadidiko ihany koa ny nanaovako sary lolo, rahona, sy voninkazo. Nataoko lehibe noho ireo trano nataoko izy ireo.
GV: Inona no ataonao sary? Ahoana ny fomba isafidiananao ny tetikasanao?
Niezaka nanao sary aho isanandro, noho izany, matetika dia zavatra mivoaka avy aty amiko eo noho eo ireo: zavatra notenenin'ny hafa, toe-javatra novakiako, sary, hira fihainoko, toe-javatra nifanaraka tamin'ny lohahevitra mahaliana ahy. Miankina ihany koa amin'ny fihetseham-poko.
Olona mpandeha/mpandao hatrany no nanodidina ahy. Namana izay nanapa-kevitra ny handao an'i “Porto Rico” mandritra ny fotoana voafaritra mba hiaina fiainana any amin'ny toerana hafa. Maro irao namana no nianatra teto sy tany amin'ireo tanàna hafa tao Espaina, ka taorian'ny fieritreretana lava momba izany, sy fametrahana ny fanontaniana rehetra teto an-tany — niainga tamin'ireo adaladala indrindra ka hatrany amin'ireo sarotra indrindra– nanapa-kevitra ny ho aty aho tamin'ny farany. Fiainana mahatalanjona foana ny làlana rehetra. Ilay tanàna, ireo namako vaovao, ireo fiainam-baovao. Nanana fiainana “talohan'ny Barcelone” sy fiainana “nandritra ny Barcelone” aho. Ho hitantsika izay hitranga manaraka eo.
GV: Ary “Porto Rico”? Ahoana ny fanampiana na ny famotehan'ilay hoe avy aminà Nosy iray anao?
LR: Toy ny mitranga amin'ny olon-drehetra, mahatonga anao hankafy bebe kokoa zavatra hafa maro ny elanelan-tany. Ny zavatra hitanao ho mandreraka indray mandeha, ihatahanao kely, amin'izay ianao mahita azy ho zavatra tsy manampaharoa efa hatrizay. Ireharehako ny tany nihaviako sy ny maha izaho ahy, ary ny fomba isehoan'izany amin'ny asako amin'ny maha-mpampahaingo an-tsary ahy.
GV: “2003: Fantaro ireo tena namako be.” Lazao ahy ny mombamomba ireo namanao.
LR: Fony aho mpianatra tao amin'ny Oniversiten'i Porto Rico, tany “Recinto de Rio Pedras”, dia nifanerasera tamin'olona maro be. Olona avy any amin'ny tanàna hafa eran'ny nosy. Manana tombotsoa iraisana ny maro amin'izy ireo. Betsaka amin'ireo, azoko lazaina, no namako akaiky be sy manana toerana lehibe ato am-poko. Nianatra Horonantsary ny maro amin'izy ireo; nianatra ny literatiora “fanaovana fampitahàna” ny sasany. Arakaraky ny nandefanan'ny taona no nahafantarako betsaka ny momba azy ireo sy niarahako tamin'izy ireo. Claudia Calderon, Yasiri Castro, Charlie Rivera, Chemi Gonzalez, Ariel Hernandez Domenech, Marina Reyes Franco, Rojo Robles, Mara Pastor, Ruben Gonzalez, Raymond Forbes, ary i Maria Ines Lefebre, mba mitanisa sasantsasany fotsiny, manam-pahaizana sy tafita daholo izy ireo. Tena faly aho amin'ny fomba nihazonanay ilay fifandraisana nandritra ny taona maro.
GV: Toerana aiza no tianao haleha?
LR: Rehefa mahazo hirika indray mandeha ny hiala ao “Porto Rico” ianao, tontolo iray feno safidy no misokatra. Mba tiako raha afaka mitety ny tanàna rehetra maneran-tany aho. Kanefa, aleo ny zava-misy no jerena, te hiteny aho hoe tiako ny hipetraka vetivety any Afovoany Atsinanan'ny tany noho ny antony maro. Ny literatiora, zavakanto, mozika, sy kolontsain'ireo firenena maro be izay manana toerana ara-jeografia nahatalanjona ahy foana. Nandaniako fotoana maro ny fianarana ireny zavatra ireny, nampiana-tena, ary tsy nisy fiatoana. Fifoforana tsara be sy mahatalanjona izany. Raha nisy marina ny fiainana tany aloha tany, azo antoka fa teraka sy nonina tany aho.
GV: Ary fa maninona no Bob Dylan?
LR: Goavana i Bob Dylan. Maro ireo hirany no mampihetsi-po sy tsara. Tamin'ny voalohany nijanonako sy nihainoko ilay “Ballad of Hollis Brown,” nihevitra aho fa mendrika raha hohaingona an-tsary ilay izy. Tonga taty amin'ny Oniversite, nanome hirika ny tenako mba hiasa tao amin'ny toko faharoan'ny tantaran'ny fampihaingona an-tsary. Sarotra ny nisafidy ny andininy izay hohaingoko an-tsary satria tsy tantara an-tsary lava be ilay izy. Toy ny fanazàrana aza ilay izy, ka nila nanapa-kevitra aho hoe endrika mampihetsi-po sy mitantara inona no hanomezako lanja ity ao anatin'ny pejy efatra fotsiny. Vao azoko mazava indray mandeha izay, nataoko izay hamitàna ny sary rehetra tao anatin'ny roa andro; lokoina mandritra ny andro iray io ary atolotra amin'ny andro hafa.
GV: Ahoana ny fihetseham-po amin'ny hoe fantatrao ny ho ataonao mandrapahafaty?
LR: Mihevitra aho fa vao hitanao izay tianao, izay manome fahafaham-po anao, izay hainao ny manao azy, izay mampikiry anao mihoatra ireo zavatra hafa, tsy misy fiverenana eo. Mila mandray an-tànana azy ianao; manome hirika azy ianao. Hitako fa ny fanaovan-tsary no tena tiako, ka maninona no tsy hanao izany mba hiainana? Te ho ampahan’ ny fahazazan'ireo olona sasany aho, ary noho izany antony izany dia te hanaingo an-tsary ireo bokin'ankizy kely. Te ho ampahan'ny tetikasan-kiran'ireo olona sasany aho, ary ireo horonantsariny. Te ho ampahan'ny tetik'asa manokan'ireo namako aho, ireo teatra-ny, ireo tononkalony, ary ireo nofinofiny. Te handray anjara amin'ny zavatra rehetra afaka ataoko aho.